Shiinaha warshad adeeg-u-jarid iyo alaab-qeybiyeyaal. Donghua
DHUA waxay bixisaa been abuur caag ah oo tayo sare leh qiimo jaban. Waxaan jareynaa acrylic, polycarbonate, PETG, Polystyrene, iyo go'yaal aad u badan. Hadafkeenu waa inaan kaa caawinno inaad yareyso qashinka oo aad keydiso qadka hoose ee mashruuc kasta oo wax soo saar acrylic ama caag ah.
Qalabka Sheet-ka waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
• Dhiirrigeliyay ama loo yaqaan "Cast Acrylic"
• Iyo Inbadan - Fadlan wax weyddii
Pgo'yaal xaashi ah Cut ilaa Size iyo Adeegyada been-abuurka ah
DHUA waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah qalabka xaashiyaha thermoplastic-ka iyo xaalada xallinta farshaxanka ee dhammaan baahiyahaaga wax soo saar. Hadafkeenu waa inaan kaa caawinno inaad yareyso qashinka oo aad keydiso qadka hoose ee mashruuc kasta oo wax soo saar acrylic ama caag ah.
Waxaan ku bixinnaa adeegyo goyn sax ah oo sarreeya oo leh dhiigbaxa cirifka CNC iyo qalabka goynta leysarka. Waxaan goyn karnaa oo ku xardhi karnaa sawirka aad dooneysaan, halheys, astaan, xigasho, iwm wixii cabir ah, qaab ah, iyo qaabka aad doorbideysaan. Laga soo bilaabo xaashida fudud illaa xuduudaha adag iyo calaamadeynta, hal gabal ama soo saar taxane ah - dhammaantood waxaa lagu suurta geliyay qalabkeena jarista.
Jarida Laser & Shaqada CNC
Goynta laser: Waxay ku habboon tahay joomatari ahaan fudud iyo sidoo kale walxaha isku dhafan oo lagu shubi karo saxnaan faahfaahsan. Cidhifyada qalabka balaastigga ah ee la gooyey ayaa leh dhammaystir dhalaalaya - laser cut acrylic or custom cut plexiglass, tusaale ahaan. Waxay leedahay dabacsanaan heer sare ah waxayna la tacaali kartaa mashaariicda heer kasta oo kakanaanta ah. Mashiinka goynta leysku wuxuu ku reebayaa saameyn dhalaalaysa cidhifyada qalabka sida acrylic.
Goynta CNC: Waxay ku habboon tahay joomatari ahaan fudud iyo sidoo kale walxo isku dhafan oo lagu shubi karo saxnaan faahfaahsan. Ma jiro mashiin kale oo goyn ama xardho oo si fiican ugu shaqeeya qalabka adag marka loo eego CNC. Iyadoo la adeegsanayo mashiinka jarista CNC, badeecada loo baahan yahay waxay noqon kartaa mid si gaar ah loo qiyaasi karo, loo qaabeyn karo loona qaabeyn karo naqshad hal abuur leh.
Been Abuurka Custom
Goynta Custom iyo xardho (Laser iyo CNC Goynta)
Goynta Sax: Goynta Xagasha, Goynta Bandsaw, Qaababka, Gooynta Goobaha
Qodista Hole Sax ah, Countersink, Taabashada
Daabacaadda warqadaha looxa ama caaga kale
Been abuur & Gole
Naqshadeynta Alaabada & Injineernimada
Go-to-Order Acrylic ama waraaqaha kale ee caaga ah
Sawirro ama sawir gacmeedyo
Waxyaabaha iyo dhumucda
AI feyl ama PDF shaqooyinka Goynta Laser
Muraayadda Beerta looxa loo yaqaan 'Acrylic Garden Mirror To Cut
Muraayada loo yaqaan 'Acrylic Mirror Cut To Size'
Xaashida Muraayada looxa loo jarjarey
Iska yaree Cabirka Muraayadda loo yaqaan 'Acrylic Mirror'
Waraaqaha Muraayadda Cuttable
Goynta Muraayadda looxa
Glitter Xaashida looxa Waayo Laser Goynta
Muraayadda Jar Laser
Xaashida Xaashida looxa loo yaqaan 'Acrylic Sheet To Cut Size'